Irè Mma Hacks Nyocha - Techaa
Soro ndị a YouTubers Maka Ikike Mma Mma Hacks na Nyocha
Obodo ndị mara mma n'ịntanetị na-eto ngwa ngwa na ọtụtụ nde ndị na-ekiri ha na ndị debanyere aha na-eso ndị na-emetụta etemeete maka usoro etemeete ọhụrụ, hacks na nyocha. Nke a bụ ndepụta nke ise etemeete na ịma mma influencers na YouTube maka ụfọdụ hacks na nyocha nke ga - enyere gị aka ịme egwuregwu ị mara mma.
Mara aha Corallista, ọwa Ankita bụ otu nkwụsị maka ihe niile mara mma. Onye na-ede blọgụ ahụ, bụ onye wepụtara ngwa ngwa etemeete ya na mmekorita ya na ụlọ ọrụ ụlọ, bụkwa onye na-akwado ahụ positivity. Na-na n'ihi na ụfọdụ ihe ọmụma na mgbe-mara-tupu mma Ama!
N'ịghasị echiche ekwere na naanị ụmụ nwanyị nwere ike iji etemeete, Manny kwenyere na ụmụ nwoke nwekwara ike iyi etemeete na-enweghị ikpe na ilelị. Manny bụ onye nnọchi anya mara mma maka ụdị dị ka Maybelline na ọwa YouTube ya juputara na vidiyo dị ịtụnanya gụnyere hacks etemeete, nyocha ihe eji eme ihe, ngwa ngwa Mee N'onwe Gị na ihe ndị ọzọ.
Onye America a etemeete ọkachamara na ọkachamara mara mma na-ekerịta nyocha ya na etemeete, na -emepụta ihe egwu dị mfe maka ndị na-ekiri ya ma na-enye mmadụ niile ezigbo mma. Site n'inwe mmekọrịta na Kardashians na mwepụta nke ngwaahịa mara mma, Hill bụ otu n'ime ndị ama ama ama ama ama ama ama ama ama ama ama ama ebe nde isii. Ugwu na-ebuputa vidiyo oge niile banyere ihe ọhụrụ, oge etemeete maka echiche, ịmụrụ anwụrụ na anya.
Otu n'ime ọwa mmiri YouTube nke mepụtara ama n'ụwa niile bụ onye mara mma Shruti Anand. Dika amara India maka ulo ogwu ya na ihe di mfe nke DIY, Anaysa, ihe kariri nde mmadu nde mmadu ndebanye uzo ya, na-enye azịza ulo di mfe na usoro ima nma di nfe.
Site na afọ 14, Nikkie de Jager soro agụụ ya wee bụrụ onye raara onwe ya nye na otu n'ime ọwa YouTube kachasị ewu ewu. Ọ na-agbakwunye vidiyo mgbanwe dị ịtụnanya ma na-enye ozi banyere ike etemeete. O nwere nnukwu onye ofufe-amara ma mara maka ụdị nnwale ya na echiche ya.
Ọzọkwa Gụọ: Rightzọ ziri ezi ịtọ etemeete, Dị ka Charlotte Tilbury si kwuo
edozi isi maka ụmụ agbọghọ nwere ihu oval
kacha mma akụkọ ihe mere eme na fim nke Hollywood
ụdị agba mbọ dị iche iche
chere banyere inyere ndị ọzọ aka
ntutu a na-achọghị na mwepụ ihu na-adịkarị
wwe john cena nwunye aha